म को हुँ? – Redstar August
A diary to share..
 » You&apos;re currently reading "म को हुँ?"
म को हुँ?
तपाँइलाइ के लाग्छ? यो प्रश्न सरल हो कि कठिन ? एक पटक आफैंलाइ सोध्नुहोस।
सामान्यत परीचय भन्ने बित्तीकै नाम, ठेगाना, काम, ….यस्तै कुराहरु जोडीन्छन। म फरक हुन खोजेको होइन तर आजभोली यी सबै कुरामा म परीचय भन्दा अरु नै कुरा बढी देख्छु ।
त्यसैले त ” तँ को होस्?” भन्ने प्रश्न फाइनल एक्जाम मा नजानेको प्रश्न भन्दा बढी जटिल लाग्छ मलाइ!
हुन त आजभोली मान्छे प्रतीको धारणा उसको धन सम्पती,उसले चढ्ने गाडी, बोक्ने मोबाइल ले निर्धारण गर्ने जमाना छ अब त्यसैगरी परीचय खोज्ने हो भने त मेरो यो संसारमा हनु र न हुनु बराबर नै हो। तर अलिकती फरक ढंग ले सोच्ने हो भने पक्कै पनि केही त फरक आउला।
फरक हुनुलाइ नै परीचय मान्ने हो भने पनी
कतै सुनेको एउटै अनुहार भएका त सात जना हुन्छन् रे संसारमा अब नाम र काम जस्ता कुरामा फरक खोज्नु त झन मुर्ख कुरा भए।
विचार मान्छेको परीचय हो त ? हुन पनि सक्ला तर समय सँगै परिवर्तन हुने कुरालाइ खै कसरी परीचय भनौ।
जति सोच्दै गयो त्यती जटिल हुदै जान्छ पक्कै पनी यो सब त्यती सजिलो कुरा होइन।
ओशोले भनेका थिए, जुन दिन तिमी आफँुलाइ “म को हुँ?”भन्ने प्रश्न गर्दा केही उत्तर भेट्दैनौ त्यही पल तिमी आफुलाइ चिन्नेछौ।
म को हो भनेर तपाँइलाइ चिनाउनको लागी पहिले मैले आफैलाइ चिन्नु पर्ने हुन्छ। त्यही चिन्ने प्रयास गर्दैछु। बारम्बार आफैलाइ प्रश्न गर्छु सयथरी उत्तर भेट्छु। थाहा छैन ओशो ले भने झैं कहिले हो मैले उत्तर नभेट्ने!
परीचयको नाममा यतीका कुरा भनिसकेपछी यत्तीकै कुरा टुगं़्याउन मनले मानने। म कुनै अपवाद होइन र बन्नु पनि छैन ।सपना देख्ने एउटा सामान्य मान्छे हो म। कर्ममा विश्वाश गर्छु । सकेसम्म ख़ुशी हुन सिक्दै छु । यात्रा गर्न मन पर्छ। कहीले कता जे मनमा आउछ त्यही लेख्छु। लेखेका कुरा यतै हुन्छन् मन लाग्छ भने पढ्नु होला, सल्लाहा सुझाव दिनुहोला ।
नाम सचिन हो अहिले सिड्नी मा छू। बाटोमा , बसमा वा ट्रेनमा भेटिन सक्छु, देख्नु भयो भने बोलाउनु होला। थप केही मेरो बारे जान्न मन लाग्छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला रिप्लाइ गर्ने छु!
आमा, सपना र डिग्री
कलर अफ लभ
कलर अफ अस्तित्व
लाइफ, लभ एन्ड एब्स्ट्रयाक्ट लेएर्स
तारा तेरे नाम।
Sapanama Harayeko Manchhe on आमा, सपना र डिग्री
Sapana Harayeko Manchhe on आमा, सपना र डिग्री
Dhiren on आमा, सपना र डिग्री
Binod chhetri on आमा, सपना र डिग्री
Dhiren Gurung on कलर अफ लभ
Personal Blog of Sachin Paudel
Copyright 2016. All rights reserved. sachinpaudel.com.np